Sh.Mustafe Xaaji Ismail oo saaka ka dhoofay Garoonka diyaaradaha ee Gen. Maxamed Abshir ee Garoowe.[Video]
February 7, 2021 - Written by Editor
Garoowe:-Shiikh Mustafe Xaaji Ismaaciil Haaruun oo muddo 11 Cisha ah ku sugnaa qayba ka mid ah Gobollada Puntland ayaa maanta laga sagootiyay Garoonka diyaaradaha ee Gen. Maxamed Abshir ee Magaalada Garoowe.
Shiikh Mustafe Xaaji Ismaaciil Haaruun ayaa waxaa garonka diyaaradaha ee Gen. Maxamed Abshir ee Magaalada Garoowe ku sii sagootoyey Xubno ka tirsan Baarlamaanka Puntland , Culimo,Maamulka Mu’asasada Alminhaaj iyo Qayb ka mid ah Ganaacsatada Puntland .
Sh.Mustafe Xaaji Ismail ayaa intuu uusan ka dhoofin Garoonka diyaaradaha ee Gen. Maxamed Abshir ee Magaalada Garoowe waxaa hadalo sagootin iyo dardaaran ah ka jeediyey Sh Mohamed Abdullaahi, Sh Ahmed Abdisamad , Xildhibaan Xaraf.
Sh.Mustafe Xaaji Ismail Haaruun ayaa uga mahadceliyey dowladda Puntland , Issimada , culimada . ganasatada iyo waxgaradka kale duwan sidda ay u soo dhaweeyeen 11 cisho ee uu ku sugnaa deegaanada Puntland waxaan Sheekhu xusay in uu intii uu jooga Puntland uu ku arkar maamul iyo Culimo isku duuban arrinkaas oo Sh Mustafe uu bogaadiyey.
Sh.Mustafe Xaaji Ismail ayaa kula dardaarmay dhamaan shacabka Puntland , Issimada maamulka , culimada in alle laga baqo taas oo ahmid kaliye ee lagu badbaadi karo aduun iyo Aakhiro.